'၂ဝ၁၉ အတွက်ကတော့ ဘယ်လမှာ ဘယ်လိုသီချင်းကို ပြီးအောင်လုပ်ပြီး ပရိသတ်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကို အစီအစ? - Yangon Media Group
တေးသံရှင် ဝိုင်းလေးနဲ့တွေ့ဆုံခိုက်မှာ အခုလို မေးခွန်းတချို့မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- အဆိုတော်ကြီး ဦးခိုင်ထူးရဲ့ ”နေရာဟောင်း”ဆိုဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဦးခိုင်ထူးရဲ့သီချင်းလေးတွေကို ပြန်ဆိုဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ ပထမစိုးရိမ်တာက ဟုတ်ကဲ့ဆိုမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းညိတ်လိုက်တာက ရပါတယ်။ ဦးခိုင်ထူးသီချင်းတွေက သီချင်းဟောင်းတွေလည်းဖြစ်တယ် ဦးခိုင်ထူးဆိုရင် အမေတို့ခေတ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲထိရောက်ခဲ့တဲ့ သီချင်း တွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ သီချင်းစွဲရှိမယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိမယ်။ဦးလေးကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိမယ်၊ မိသားစုတွေရှိမယ်။ အဲဒါကြောင့် တော်တော်လေး စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဆိုမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။ နောက်သီချင်းတွေ ရွေးရင်တော့ နည်းနည်းပြောပြပါဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကျမှ ကိုယ့်အသံနဲ့ လိုက်မယ်ထင်တဲ့ သီချင်းလေးကို ရွေးပြီးတော့ သေချာလေ့ကျင့်ပြီးမှ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မေး- ”နေရာဟောင်း”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ပြန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ စိုးရိမ်စိတ်ရောရှိသေးလား။
ဖြေ- သီချင်းဆိုမယ်ဆိုတုန်းကတော့ စိုးရိမ်မှုက ၁ဝဝရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုရှိပါတယ်။ ဝိုင်းလေးတို့ဆိုရင်လည်း အရင် တုန်းက မူရင်းအဆိုရှင်တွေဆိုတာကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေဆိုရင် သီချင်းကိုဖျက်တာတို့၊ ဘာတို့ပြော ကြတာတွေရှိပါတယ်။ မူရင်းသီချင်းကို အနည်းငယ်ပုံစံပြောင်းပြီးဆိုရတာက တာဝန်အရမ်းကြီးပါတယ်။ ဝိုင်းလေးလည်းပြန် ဆိုတေးတွေကိုဆိုတာ နည်းပါတယ်။ ဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းကိုဆိုရတာပိုကြိုက်ပါတယ်။ ပြန်ဆိုတေးမှာ က ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ သီချင်းကိုမပျက်သွားအောင်ထိန်းရတာ အရမ်းကို ခက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို အသံသွင်းတုန်းကလည်း စာသားတွေ၊ သံစဉ်တွေမှန်ရဲ့လားဆိုတာကို အကြိမ်ကြိမ်အခါအခါပြန်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်လေးလည်းကြိုးစားထားပါ တယ်။ အခု လိုသီချင်းထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပရိသတ်တွေက နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
မေး- လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကရော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ- အခြားလုပ်ဖြစ်တာတွေကတော့ ညီမဒီလပိုင်းထဲမှာပဲ အွန်လိုင်းမှာ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အခု ပြည်ကို ရောက်နေပါတယ်။ ပြည်မှာ ဖျော်ဖြေပွဲရှိပါတယ်။ ၂၃ရက်နေ့မှာတော့ ပြင်ဦးလွင်က ပန်းပွဲတော်မှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ ရှိပါတယ်။ ၂၅ရက် ခရစ်စမတ်ကတော့ နေပြည်တော်မှာ ရှိပါမယ်။ နယူးရီးယားကတော့ ရန်ကုန်မှာ ပဲသီချင်းတွေဆိုရင်းဖြတ်သန်းဖြစ်မှာပါ။
မေး- ဝိုင်းလေးလည်း အခုနောက်ပိုင်း သီချင်းတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်ပဲတင်ဖြစ်တယ်နော်။
ဖြေ- အွန်လိုင်းမှာက ညီမတို့က MTV အခွေထွက်မယ်ဆိုလည်း ဒီနေ့ထွက်ရင် နောက်မှာ Link က ပြန်ရောက်နေပါတယ်။ ဘယ် လိုပဲလုပ်၊ မရောက်အောင်လုပ်လုပ်မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်သီချင်းတွေကိုဖြန့်တာက ပိုပြီးတော့ ထိရောက်မယ်လို့ ထင်လို့ လုပ်ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Album လိုက်ကတော့ အဆိုတော်တိုင်း မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး- ၂ဝ၁၉ မှာရော အနုပညာအလုပ်တွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိမလဲ။
ဖြေ- ၂ဝ၁၉အတွက်ကတော့ ဘယ်လမှာဘယ်လိုသီချင်းကို ပြီးအောင်လုပ်ပြီး ပရိသတ်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကို အစီအစဉ်လေးတွေဆွဲထား တာရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အခုကတည်းက စီစဉ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။
မေး- အဆိုပိုင်းတင်မဟုတ်ဘဲ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုရော လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
ဖြေ- သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုတော့ ကူးဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါရိုက်တာက ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ လာကမ်းလှမ်းရင် ကိုယ်က ဇာတ်လမ်းတွေဖတ်ရမယ်။ ကာရိုက်တာနဲ့လိုက် ဖက်အောင်လုပ်ရမယ်။ နောက်သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်တော့ သင်တန်းတွေတက်ရမယ်။ အဲဒါကြောင့် မလုပ် ဖြစ်တာပါ။ ကမ်းလှမ်းတာတွေလည်း မရှိသေးပါဘူး။
''အသက်ကြီးသွားရင်လည်း အသက်ကြီးတဲ့ကားတွေ အများကြီး ရိုက်လို့ရတယ်၊ ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လူငယ်ကား??